အစားအစာနှင့်မီးဖိုချောင်သုံး | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမွှေးအကြိုင် Plum ကိတ်မုန့်
အပေါ် Posted 09.12.2019 09.12.2019
ဤ Plum ပိုင်သည်ချိုသောမုန့်စိမ်း၊ အရည်ရွှမ်းသောအရသာရှိပြီးအရသာ ရှိ၍ သစ်ကြံပိုးနှင့်ဂျင်းကိုပေးသည်။ အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာ pastries, ကတစ်ခုထပ်မယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ! Plum Pie အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - စာရွက် ...
Raspberry Frozen Berry Liqueur လုပ်နည်း
အပေါ် Posted 04.11.2019 04.11.2019
ဆောင်းရာသီအထိသိုလှောင်ရန်အတွက် - Raspberry ရာသီတွင်အိမ်ရှင်မများစွာသည်ကျန်းမာသောသီးများကိုအေးခဲစေရန်လွှတ်လိုက်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများမှအားလပ်ရက်များတွင်သင်လုပ်နိုင်သောအရသာရှိသောအရက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အချိုရည်ကိုရရှိသည် ...
အဆိုပါချစ်ပ်သို့မဟုတ်အသားပေါ်3ငံပြာရည်
အပေါ် Posted 02.10.2019 02.10.2019
ကျွန်မအထူးသဖြင့်ထိုသုံးနဲ့တူရေစာဝက်အူချောင်း၏အမျိုးမျိုးအနက်။ အမြဲတမ်းအသား, ကြက်သား, အိမ်လုပ်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူချစ်ပ်, makaroshkam, pita မုန့်အတွက်သရေစာနဲ့ပိုပြီးသူတို့ကိုအချို့ကိုပြင်ဆင်လော့။ အမှန်မှာ ...
တိုင်းအရသာအဘို့အဝက်အူချောင်း: ကင်, မုန်နှင့်အဓိကဟင်းလျာများများအတွက် TOP-5 ချက်ပြုတ်နည်းများ
အပေါ် Posted 30.09.2019 30.09.2019
ဤရွေ့ကားအံ့သြဖွယ်ဝက်အူချောင်း - သင့်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများမှပြီးပြည့်စုံအဖြည့်။ သူတို့နှင့်အတူ, သင့်အစားအစာများပင် tastier ဖြစ်လိမ့်မည်။ ချက်ပြုတ်နည်းများ၏တစ်ဦးကရွေးချယ်ရေး။ အဆိုပါ 200 ဒိန်ခဲငံပြာရည်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအတွက်ငံပြာရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများပြီးဆုံး: ဒိန်ခဲ၏ 110-120 ဂရမ်, ...
ထူးခြားသောအရသာ - ပန်းသီးနှင့်အတူချဉ်သခွားသီး,!
ဤသည်အစိမ်းရောင်ပန်းသီးပေးသောအပေါငျးတို့သညျအခွားနူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အချဉ်ဓာတ်, ကနေကွဲပြားခြားနားသောသခွားသီး appetizer, ချဉ်။ ရိတ်သိမ်းပါကသခွားသီးနှင့်သစ်သီးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေး, အလွန်အရသာနှင့်အရသာဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူ hash များအတွက်မူရင်းစာရွက်
အပေါ် Posted 27.09.2019 27.09.2019
စားပွဲပေါ်နွေရာသီမကြာခဏအများအပြား hash ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီပန်းကန်ငါတို့၏ကိုယ်ခငျြးကိုနိုင်ငံသားများ၏မတ်ေတာအတှကျသိ, ဖုံးကွယ်ဖို့အဲဒီမှာတကယ်ကဘာလဲ။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာမဆိုဖီးနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် hash အမျိုးမျိုး ...
ဤသည် hodgepodge သင်ခဲကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ကြသည်။ နွေရာသီ menu ကိုအမျိုးမျိုးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာရွက်။ အဆိုပါပန်းကန်အရသာကျေနပ်စရာနှင့် savory ဖြည့်စွက်နှင့်အတူအအေး kvass နှင့်အတူဝတ်ဆင်, ဿုံလန်းဆန်းသည်။ ...
appetizer ချက်ပြုတ်နည်း - ကိတ်မုန့်သားညှပ်ပေါင်မု
မဟာစားပွဲ၌တွေ့မြင်နှင့်သားညှပ်ပေါင်မုကိတ်မုန့်၏ပုံစံအတွက်မူရင်းအရသာရှိတဲ့မုန်မြည်းစမ်းဖို့ nice ။ ဤသည်ပန်းကန် - ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ, ပြင်ဆင်ထားရန်ရေတိုသွေးဆောင်လှပါတယ်။ Sandwich ကကိတ်မုန့်အကောင်းတစ်ဦး tool ကို podnadoevshy သုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ ...
ဝိညာဉျကိုလေယာဉ်ရေစာ: walnuts နှင့်အတူလှော်ငရုတ်ကောင်း, လာတတ်သည်သားနဲ့ဒိန်ခဲ - စာရွက်
အပေါ် Posted 25.09.2019 25.09.2019
သငျသညျမူရင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောတစ်ခုခုချက်ပြုတ်ချင်အခါတိုင်းဒီစာရွက်ကျိန်းသေထွက်ကူညီပေးပါမည်။ လှော်ငရုတ်ကောင်းဟာသေးသေးလေးလှည့်ကွက်လိပ်ပူဇော်နှင့်အခွံမာသီး, ဒိန်ခဲနှင့်အချို့သောအရသာတတ်သည် caruncle ထဲသို့သွင်းထား။ 8 များအတွက်မိတ်ဆက် ...
သင်ပြိုလဲ Menu ထဲမှာဟင်းချိုရွှေဖရုံသီးရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည်ရာသီ၏ပြောင်းလဲမှု, ပထမဦးဆုံးနွေးအအေးရှင်သန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေမည်။ နှင့်သင်တန်း၏, သငျသညျက၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအရသာ၏အထူးအရသာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ...
အပေါ် Posted 24.09.2019 24.09.2019
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုဒုတိယအာလူးမုန့်ဟုခေါ်တွင်သည်။ ဒီအရသာဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အိတ်အနည်းဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲဆောင်းရာသီမှာအဘို့အအတော်များများမိသားစုများစတော့ရှယ်ယာတက်။ အဘယ်အရာကိုအမှားတွေအာလူးနိုင်ရန်အတွက်ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်လာမည့်စပါးရိတ်ရာကာလမှကောင်းသောအရသာနှစ်သက် ...
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဇီယာစေ့နှင့်အတူ marinated zucchini - စာရွက်
အပေါ် Posted 22.09.2019 22.09.2019
zucchini မတူဘဲ, zucchini အသားအရေမဲမှောင်နဲ့သိပ်သည်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဇာတိပကတိ - ပိုပြီးအရည်ရွှမ်း။ ပိုပြီးကဲ့သို့ချဉ် zucchini - သူတို့ tverdenkimi နှင့် crispy ရရှိခဲ့ကြသည်။ မည်သို့မှ ...
ချဉ်ပူငရုတ်ကောင်း - တကယ့်ခဲဖွယ်စားဖွယ်!
ငရုတ်ကောင်းအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးရုံရေစာအဖြစ်နှင့်အခြားဟင်းလျာများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်။ သငျသညျဝက်အူချောင်းအဘို့, ဆောင်းတွင်းသုပ်အတွက်အသားဟင်းလျာများသူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းအတွက်အလွန်အရသာရှိတဲ့ပူငရုတ်ကောင်း ...
နှပ်ခရမ်းချဉ်သီး - ကျပ်
အပေါ် Posted 20.09.2019 20.09.2019
လူအပေါင်းတို့သည်ချက်ပြုတ်နည်းများစည်သွတ်ခရမ်းချဉ်သီးထဲကအများစုဟာဒီကိုးကွယ်။ မွှေးနှင့်စပ်အရောအနှောနှငျ့ပွညျ့စုံချဉ် "လှေ" သူတို့ကအမြဲအောင်မြင်မှုရှိစားပွဲတစ်ခု။ အမြားအပွားအိမ်ရှင်မဤစာရွက်ခရမ်းချဉ်သီးအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ...
yummy စပ် - ကြော်Provençalဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် adzhika
အဘယ်သူသည်အစဉ်အဆက်အလွန့်အလွန်မွှေးနှင့်စတိုးဆိုင်ဖို့ရာသီအပြီး go မရှိတော့ adjika ကိုမီးရှို့ဒီကွိုးစားခဲ့သည်။ ဒီစာရွက်ထဲမှာချက်ပြုတ်, oh ဒါကောင်းသော! ဆောငျးရာသီသည်အထိသိုလှောင်ရာသီကိုပြင် ...
2 ဆေးညွှန်း: ရုရှမှာ "bollocks" Seasoning
ရုရှားကရာသီ horseradish အတွက်ရေပန်းအစားဆုံး။ ဒါဟာမဆိုအသား, ချက်ပြုတ်ဝက်ဆီ, ဝက်သား, brawn မှဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုကောက်မုန့်ကိုပိုပြီးအရသာမုန့်, ​​ဝက်သားပါးနှင့်ထိပ် zaboristaya ၏အထူ strips တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
ကြက်သွန်နီအကွင်း fries - ဘီယာများအတွက်စူပါစာရွက်!
အပေါ် Posted 18.09.2019 18.09.2019
ကြက်သွန်နီအကွင်း - မိတ်ဆွေများကတစ်ဦးဘီယာအဘို့အရောက်လာသောအခါ, လိုအပ်သောသောရေစာ။ အရသာချစ်ပ်ထက်မဆိုးရွားသည်။ ထိုအခါကြီးမားသောရေနံပမာဏဖြစ်သော်လည်း, ဒါကြောင့်မဆိုးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် - ကိုမည်သို့ ...
ဤသည်ယို - အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်၏ရင်းမြစ်များနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းရန်ဒါလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်သောအခြားဗီတာမင်များ၏အရေအတွက်။ သငျသညျဆကျဆံဖို့အတှကျ redcurrant သီး၏အိုးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ အထဲတွင် Berries ပါ ...
အတော်များများကသူတို့နှငျ့အတူ calamari နှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုချစ်။ ဤသည်အဏ္ဏဝါခဲဖွယ်စားဖွယ်ကောင်းသောကျန်းမာရေးနှင့်ရှည်သောအသက်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအသုံးဝင်သောပရိုတိန်းနှင့်သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ Marine ပြည်ကြီးငါး - ကနေစပ်ရေစာ ...
ဒိန်ခဲ croquettes ချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Croquettes - ပြင်သစ်အစားအစာများ၏ပန်းကန်။ အဆိုပါဘာသာပြန်ချက် "အကြပ်အတည်း, ကိုက်" ကိုဆိုလိုတယ်။ ရေစာကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းသေးငယ်တဲ့ဘောလုံး, ထို့နောက် breaded နှင့်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်သင့် croquettes - ကအရသာရဲ့ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 644 Next ကို 's Page
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,974 စက္ကန့်ကျော် Generate ။